‘कुलत’ बन्दै इन्टरनेट : यसरी सकिन्छ जोगिन — Bhaktapurpost.com
‘कुलत’ बन्दै इन्टरनेट : यसरी सकिन्छ जोगिन
हाम्रो शरीर कम्प्युटर चलाउँदा बस्ने वा मोबाइल चलाउँदा पल्टिने आसनका लागि बनेकै होइन
केही समयअघि गर्धन दुख्ने समस्या लिएर आएका २५ वर्षीय युवकलाई मेरुदण्डको हाड खिइने जटिल रोग भएको अनुमान हाडजोर्नीसम्बन्धी चिकित्सक राजेश महर्जनले गरेकै थिएनन् । प्राय: ५५ वर्षमाथिका पुरुषमा देखापर्ने रोग ती युवकमा देखेर डा. महर्जन अचम्ममा परे ।
एक्सरे रिपोर्ट हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने ती युवकको सामान्य अवस्थामा फर्कनै नसक्ने गरी हाड खिइसकेको रहेछ। पछिल्लो समय गर्धन दुख्यो र रिँगटा लाग्यो भन्दै जँचाउन आउने युवाहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गरेको डा. महर्जनको अनुभव छ।
डा. महर्जन भन्छन्, “हाम्रो शरीर कम्प्युटर चलाउँदा बस्ने वा मोबाइल चलाउँदा पल्टिने आसनका लागि बनेकै होइन।” “तर पछिल्लो समय
कार्यालयमा काम गर्ने व्यक्तिहरू मात्र नभई घरमा बस्ने गृहिणीमा पनि उमेर नपुग्दै त्यस्तै समस्या देखिने गरेको उनी बताउँछन्।
त्यस्तो रोग लिएर आउने अधिकांश गृहिणीहरू घरमा मोबाइलमा सामाजिक सञ्जाल चलाएर बस्ने गरेको सुनाउँछन् । “श्रीमान् अफिस र छोराछोरी स्कूलकलेज गएपछि काम हुँदैन अनि फेसबुक र युट्युब चलाएर बस्छौँ भन्नुहुन्छ,” डा. महर्जनले भन्छन्।
“उहाँहरूको पनि उमेर नपुग्दै हड्डी खिइने चरणमा पुगिसकेको भेटिन्छ।”
अनि बिस्तारै दुख्न थाल्ने र त्यसपछि घाँटी वा ढाडको हड्डीको आकार परिवर्तन हुन्छ। अन्तत: हड्डी खिइएर स्नायुमै असर परेपछि निको बनाउनै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने उनी बताउँछन्। त्यसैले घाँटी कक्रक्क परेको छ र दुखाइ छ भने त्यही बेला नै उपचार गराउन, आवश्यक आराम गर्न र व्यायाम गर्न उनी सुझाउँछन्।
डा. महर्जन भन्छन्, “नत्र तिनै युवकको जस्तै हुन्छ जसले धेरै समय आराम गर्नुपर्छ र बाचुन्जेल व्यायाम त गर्नैपर्छ।” “तर त्यति गर्दा पनि हामीले सामान्य अवस्थामा फर्काउन सक्दैनौँ। उनको खिइएको हड्डी केही गर्दा पनि पहिलाको जस्तो अवस्थामा पुर्‍याउन सकिँदैन।”
मानिसको गर्धनमा मेरुदण्डका सातवटा हड्डी हुन्छन्। निहुरेर मोबाइल चलाउँदा वा एउटै आसनमा बसेर कम्प्युटरमा काम गर्दा मेरुदण्डको त्यही भाग बोझ पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। “(मेरुदण्डको) हड्डी धस्सिँदै जाँदाकै अवस्थामा उपचार गरिएन भने खिइन थाल्छ र खिइएपछि नसा (स्नायु) मा छुन्छ,” उनी भन्छन्।
मेरुदण्डले मस्तिष्कलाई स्नायुप्रणालीसँग जोड्छ। मेरुदण्डका हड्डीमा समस्या उत्पन्न हुँदा पूरै शरीरमा समस्या पर्न सक्छ। “त्यसपछि रिँगटा लाग्ने वा हात झम्झमाउने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अलि जटिल अवस्थामा पुग्नु हो र पुरानै अवस्थामा फर्काउन असम्भवजस्तै हुन्छ।”
त्यसबाट जोगिनका लागि डा. महर्जन यस्तो सुझाव दिन्छन् –
त्यस्तै किशोरावस्थादेखि माथि उमेरका बिरामीमा भने आँखामा सुख्खापन धेरै हुने समस्या लिएर आउने गर्छन्। “खासगरी गेम खेल्ने बच्चाहरूमा टाढा नदेखिने ‘मायोपिया’ हुने गरेको देखिन्छ,” डा तुलाधरले भनिन्। “अनि किशोरावस्थादेखिका अधिकांश बिरामीहरूमा आँखा सुख्खा हुने पाइएको छ।”
किन आँखा खराब ?
कुनै पनि ग्याजेटमा हेर्दा लामो समयसम्म एकटक हेरिरहने र सामान्यत: हाम्रो आँखाको परेला जतिपटक झिम्किनुपर्ने हो त्यति नझिम्किँदा त्यसले आँखाकस मांसपेसी थाक्ने र सु्ख्खापन देखापर्ने उनले बताइन्।
त्यसैले उनी सकेसम्म स्क्रीनमा कम हेर्न सुझाउँछिन्। बालबालिकालाई मोबाइल वा कम्प्युटर प्रयोग गर्न कम दिने र यदि समस्या भए समयमै उपचार गराउनुपर्ने उनी बताउँछिन्। “उनीहरूलाई टाढा नदेख्ने समस्या भइसकेको हुन्छ र चस्मा नलगाई स्क्रीन हेर्दा आँखालाई थप दबाव पर्छ त्यसैले उपचार समयमै गराउनुपर्छ,” उनले भनिन्।
दिनमा दुई घण्टाभन्दा बढी कम्प्युटरमा काम गर्नेहरूलाई ‘कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम’ हुने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। लगातार स्क्रीन हेर्ने मानिसहरूमा आँखा सुख्खा हुने, पोल्ने, बिझाउने र हेर्नै असहज हुने गर्छ।
आँखा कसरी जोगाउने ?
भक्तपुर र मध्यपुरमा मंगलवारदेखि विद्यार्थीहरुलाई ‘मोर्डना खोप’
केएमसी दुवाकोटमा मन्त्री पौडेलको आकस्मिक अनुगमन